CHALLENGE COSFA NATATION DEFI FROID 2017 - Book News Madagascar
Publié mai 4, 2017 par Tiasoa
Pour diffusion immediate – Azo avoaka avy hatrany
Ny hetsika « Challenge Cosfa natation Défi Froid 2017 » dia hestaika fanao isan-taona. Andiany fahavalo ity hotontosaina ny sabotsy 6 mey 2017 ity. Misokatra ho an’ny olon-drehetra mahay milomano ny fifaninanana: miaramila, orinasa, “handisport”, mpankafy natation na “fans natation”, ary ireo fikambanana na “club licenciés”. Mpandray anjara manodidina ny 200 eo ho eo no vinavinaina handray anjara amin’ny fifaninanana, avy amin’Analamanga sy ny manodidina.
Hanomboka amin’ny 7 ora maraina ny fifaninanana ary hifarana amin’ny 5 ora hariva. Ny atoandro amin’ny 12 ora dia hisy ny fanehoana “sauvetage en eau” ataon’ny mpamonjy voina sy ny fanentanana isan-karazany toy ny dihy sy ny maro hafa.
Ao amin’ny dobo filomanosana na “piscine” Betongolo izay mirefy 33, 33 metatra no hotontosaina ny lalao. Sokajy fahatelo amin’ireo fotodrafitr’asan’ny FINA (Fédération internationale de natation). Sokajy voalohany ny “bassin” mirefy 50 metatra, sokajy faharoa ny “bassin” 25 metatra. Fotodrafitr’asa napetraky ny Frantsay tamin’ny Fanjanahantany ny dobo filomanosana ao Betongolo.
Mpandray anjara 6 taona ka hatramin’ny 20 taona no mivondrona ao amin’ny Cosfa Natation. Ankizy 2 ao amin’ny Cosfa Natation no handeha hifaninana any Budapest, Hongrie, hanatrika ny tompondaka eran-tany amin’ny taranja lomano amin’ity taona ity: lahy iray sy vavy iray, izay ao anatin’ny ekipa nasionaly ihany koa.
Hasaina manokana ireo mpanao gazety ny Sabotsy 6 mey amin’ny 12 ora sy 30 minitra hanatrika ny “point de presse”. Mankasitraka feno tompoko amin’ny fiaraha-miasa.
Raha mila fanazavana manokana dia ireto ny laharana ahazoana ny tompon’andraikitra:
Colonel Jaovanona: 032 07 523 68
Maître-Nageur Tojo Ramandimbiarisoa: 032 41 606 17
Service Communication Cosfa
Book News Agency
034 74 157 30 – 032 63 383 31